Dr. RY Langham (2019) မှအိပ်ခန်းတွင်ပြubleနာဖြစ်စေနိုင်သောအံ့သြဖွယ်ရာအချက် ၄ ချက် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်
ဒေါက်တာ RY Langham အသုံးပြုပုံကတော့အိပ်ခန်းထဲမှာဒုက္ခပြသနာများသည်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လေးအံ့သြစရာအရာ (2019)
10 ဇန်နဝါရီ 2019
သငျသညျအိပ်ခန်းထဲမှာခြောက်သွေ့သောစာလုံးပေါင်းကြုံနေရလျှင်, သင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? ဤစာလုံးပေါင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအရာသည်အမှန်တကယ်ကုစားရန်လွယ်ကူနိုင်သည်။ မင်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာမကောင်းဘူးဆိုရင် လိင် သငျသညျဖြစ်ဖို့အသုံးပြုအဖြစ်အချို့သောအံ့သြစရာအချက်များသင့်ရဲ့လိင်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိသလောက်နိုင်ကစားမှာပါဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဝမ်းနည်းစရာ, In-အကြားသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူစာရွက်များလျော့နည်းခြင်းနှင့်ဒီထက်အချိန်မကြာခဏပျော်ရွှင်ကျန်းမာဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း၏အများဆုံးပျော်စရာရှုထောင့်တနေတဲ့ကျဆင်းစေပါတယ်။
သင်တစ်ဦးတွေ့ကြုံစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိုးခေါင်ရေရှားခြင်း," ဒီအကြောင်းပြချက်နေဆဲအများအပြား Self-လေးစားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအခြို့သောလမ်းအတွက်, နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်နိမ့် Self-တန်ဖိုးထားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်, နှင့်အနိမ့ Self-လေးစားမှုအိပ်ခန်းထဲမှာအလေးအနက်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါမှုအရာရှိပါတယ်..
သငျသညျလိင်သို့မဟုတ်များအတွက်လုံလောက်သောအချိန်ထွက်ထွင်းဘူးသည့်အခါ "Self-အပျော်အပါး," ကစိတ်ပျက်, မကျေနပ်မှု, အမျက်ဒေါသ, စိုးရိမ်စိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် - ညာဘက်လိင်များအတွက်စိတ်ဓါတ်များထဲကသင်တို့အားယူနိုငျသောအချက်များ။
သင့်ရဲ့အဖော်နှင့်အတူ Porn အကဲခတ်
အဲဒါကို "အမွှေးအကြိုင်တက်" သူတို့လိင်ဘဝတွေကိုလိမ့်မည်ကြောင်းမျှော်လင့်ချက်အတွက်အတူတကွ porn စောင့်ကြည့်ဖို့, စုံတွဲများ, အထူးသဖြင့်ရေရှည်သူတို့အတှကျဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကြောင့်အမှန်တကယ်စနစ်တကျသင်၏အသက်တာ၌၎င်း၏ပါဝင်ဘို့ပြင်ဆင်ကြသည်မဟုတ်, အထူးသဖြင့်လျှင်, ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ porn ကိုအခြားသူများအဘို့, အချို့စုံတွဲများများအတွက် "စုံလငျ" ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ်နှင့်အညီ, ကအိပ်ခန်း၏အတွင်းနှင့်ထွက်လေးနက်ပြဿနာများဟာ host ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ porn လက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အစစ်အမှန်ခက် - ထိုအခါရဲ့တစ်စုံတစ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုခုများကနှိုးဆွဖြစ်လာသင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်စောင့်ကြည့်, ရိုးရိုးသားသားဖြစ်ကုန်အံ့။
ကြောင်း၏ထိပ်တွင်, သိပ်ညစ်ညမ်း-စောင့်ကြည့်တောင်မှသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နှင့်အတူညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်တူသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ဦးဆောင်လမ်းပြသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်ပါတယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု နှင့်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်။ အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သင်သည်သူသို့မဟုတ်သူမမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုမြင်လျှင်ဘာဖို့ "တက်တိုင်းတာ" ကိုမျှော်လင့်ပါလျှင်ထိုမှတပါး, နိမ့် Self-လေးစားမှုနဲ့ Self-ယုံကြည်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်, သင်လိင်ဆက်ဆံ၏မျှသာအတွေးမှာစွမ်းဆောင်ရည်စိုးရိမ်စိတ်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲသင့်ရဲ့စွန့်စားမှုတိုးမြှင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အများဆုံးယူဆနေချိန်တွင်ထိုအကွောငျး porn သာအမှန်တရားကနေအဝေးဆုံးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းယောက်ျား, အဘို့ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တကယ်တော့, porn ကြည့်ရှုခြင်းလည်းနိမ့်လိင် drive ကို, orgasm ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာရန်တစ်ဦးနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်တူအမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကွောငျ့, လက်တွေ့ဖြစ်, သင့်လိင်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ porn ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်သင်စိတ်ကူးယဉ်လောကရှိဖြုန်းမည်မျှအချိန်ကန့်သတ်, ဒါကြောင့်သင်အစစ်အမှန်တဦးတည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်။
ဒါကအံ့သြစရာအဖြစ်မဝင်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်အဆိုပါစာရွက်များအောက်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ပိုများသောအထူးသ, စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, ပင်ရုပ်မြင်သံကြားတဖြည်းဖြည်းဒုက္ခအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အိပ်ခန်းသို့သူတို့လမ်းအောင်ပါပြီ။ ရငျးနှီးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေချိန်တွင်ပင် - တကယ်တော့, ကစုံတွဲများမိမိတို့၏ဖုန်းများချထားရန်အဘို့အတိုးခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ ချက်ချင်းအောက်ပါလိင် - ပြည်သူ့အချို့ပင် foreplay စဉ်အတွင်းသူတို့ကိုကြည့်ရှုသောထိုသူတို့၏အီလက်ထရွန်းနစ်မှဒါစွဲဖြစ်လာကြပါပြီ။
ထို့နောက်လိင်မှတဆင့်အလျင်အမြန်ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေသောလူများလည်းရှိသည်။ သို့မှသာသူတို့သည်ယခင်ကကျူးလွန်ခဲ့သည့်ရုပ်ရှင်၊ sitcom၊ ဗီဒီယိုဂိမ်း၊ စာသား၊ ခေါ်ဆိုမှု၊ ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။ အခြားသူများနှင့်စကားပြောခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ သူတို့ကလိင်မှတဆင့်ဖြစ်စေ၊ အတူတကွဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေမိတ်ဖက်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ငါတို့အချင်းချင်းအဆက်ပြတ်နေတယ်။ ထို့အပြင်ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားလူများအပေါ်စာနာမှုကင်းမဲ့ခြင်း၊
ဤ "အဆက်ဖြုတ်" ပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုထိခိုက်စေရန်စတင်ရင်ခုန်စရာထားပါတယ် ဆက်ဆံရေး။ အထူးသဖြင့်လိင်နှင့်လိင်လှုပ်ရှားမှုများကာလအတွင်း - ကျော်တာနှင့်အိပ်ခန်းထဲမှာပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှအီလက်ထရွန်းနစ်မှကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကမှသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်သုံးစွဲဖို့အချိန် Set ပြီးတော့နက်ဖြန်နေ့တိုင်အောင်သူတို့ကိုပယ်ရှား၏။ , စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်အတူတူအချိန်ဖြုန်းနှင့်ကြာရှည်အမှတ်တရများဖန်တီး - နောက်တဖန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုသိရန်ရဖို့ဒီအချိန်ကိုသုံးပါ။
ဒါကဖြစ်ကောင်းသငျ့စိတျကူးပေမယ့်ဘယ်တော့မှ လိင်စဉ်အတွင်းသောအရပ်တို့ကိုမပြောင်း သင့်ရဲ့လိင်အသက်တာ၌ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကစုံတွဲသူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်လွှမ်းမိုးမိတ်ဖက်အဆိုပါလကျအောကျခံတဦးတည်း, နှင့်ကြီးစိုးတဦးတည်း၏အခနျးကဏ်ဍအပျေါတာပုံမှန်အားဖြင့်လကျအောကျခံ partner ၏အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူပြီးနှင့်အတူ "ကတက်အကူးအပြောင်း" လျှင်ယုံကြည်; ဒါဟာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝအသက်တာ၌မီးပြန်လည်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအကြောင့်ကြလိမ့်မည်ကိုအချို့, ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေအဘို့, မမည်။ တကယ်တော့ကအိပ်ခန်းအတွင်းရှိပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲ? ကောင်းပြီ, အခြားမိတ်ဖက်အောင်နေဖြင့်လိင်ကာလအတွင်းမလုံခြုံသို့မဟုတ်မသေချာခံစားရတယ်။
သင်ဆက်ဆံရေးအတွက်အဓိကမိတ်ဖက်ဖြစ်ဖို့အတွက်, ဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်လိင်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်, ဒါဟာအဆိုးသင့်ရဲ့လိင်ဘဝကိုထိခိုက်နိုင်သော "ရာအရပျထဲက" သင်ခံစားရပါစေသို့မဟုတ်မသက်မသာနိုင်ဘူး။ နောက်တကြိမ်, ဒီ Self-လေးစားမှုနဲ့ Self-ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် - အိပ်ခန်း၏အတွင်းနှင့်ထွက်။ သငျသညျမှာ "အခန်းကဏ္ဍ" အကူးအပြောင်းမတိုင်မီထိုကွောငျ့, သငျသညျပုံမှန်စဉ်အတွင်း play foreplay သို့မဟုတ်လိင်; သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်လေယာဉ်ပေါ်ပါလည်းသေချာပါစေ။ ထိုအလျှင်တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စိတ်ကူးဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူမသက်မသာဖြစ်ပေါ်လာသော - ကရပ်တန့်နှင့်အနာဂတ်အတွက်ပြန်လည်လည်ပတ်။ နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကာလအတွင်းအဆင်ပြေခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုခံစားရသင့်ကြောင်းအမှုမပါလျှင်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာမကျေနပ်မှုများနှင့်အများကြီးလျော့နည်းလိင်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်, စိတ်ကိုထားပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အိပ်ခန်းထဲမှာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းအဓိကအချက်များထဲကတစ်ခုအနိမ့် Self-လေးစားမှုဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်အားလုံးလမ်းများ, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းစတင်သို့မဟုတ် Self-လေးစားမှုပြန်လည်ဦးတည်သွားစေ။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးအနိမ့် Self-လေးစားမှုရှိပါကသင်ကဖြေရှင်းမပေးကြပါလျှင်, ယေဘုယျအတွက်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်း, သင့်လိင်အသက်နှင့်ဆက်ဆံရေးမျိုးသို့ filter လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
သင်သည်သင်၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေ, အလုပ်အကိုင်အစွမ်းဆောင်ရည်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သက်. မပျော်လျှင်ဥပမာ,, ကထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့လိင်ဘဝ၌ရှိသကဲ့သို့အခြားနေရာများအတွက်သင့်အသက်တာထဲသို့ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ပိုများသောအထူးသ, သင်မလုံခြုံနှင့်ဤဧရိယာထဲမှာမသေချာခံစားရအောင်အားဖြင့်သင်တို့ရှိသည်လိင်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင်တစ်ဦးအနိမ့်လိင် drive ကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်နှင့်တျမှုနညျးနဲ့ Self-သံသယခံစားချက်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ထိုခံစားမှုများသည်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါက၎င်းသည်အိပ်ခန်းအတွင်းမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုနည်းစေနိုင်သည်။ ရလဒ်ကားအဘယ်နည်း။ ခံစားချက်များကိုထိခိုက်ပါ၊ ဆက်ဆံရေးပြissuesနာများနှင့်လိင်ကျဆင်းမှု။ ထို့ကြောင့်သင်သည်“ တိုင်းတာသည်” ဟုမခံစားရပါကသင်၏ယုံကြည်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကသင်နှင့်အတူရှိမည်မဟုတ်ဟုလက်ခံခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
သမ္မာတရားကိုငါတို့ရှိသမျှသည်အလားအလာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်းအမှုတို့ကိုပြုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှုအရာတို့ကိုအချို့သည်သိသာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထဲကအချို့ဒါသိသာမရှိကြပေ။ တချို့က Control ဖြစ်ကြပြီးအချို့ဒါမှမထိန်းချုပ်ဖြစ်ကြသည်။ နှင့်အညီ, အချို့ဘက်မှာအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာသင်အိပ်ခန်းထဲမှာဖြစ်ပျက်တိုးတက်စေနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကသင်၏လိင်ဘဝမှာခက်ခဲရှည်လျားကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုသင်ဖြစ်စေတဲ့နိုင်ဘာပြဿနာများရှိခြင်းနှင့်ဒါမှလျှင်ပါသလား? နှင့်သင့်ဆက်ဆံရေးဟာ - ကိုယ့်ကိုယ်နှင့်သင့်လက်တွဲဖော်နှင့်အတူရိုးသားဖြစ်ခြင်းလိင်တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကို၏အပြည့်အဝသတိပြုမိကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သင်က fix နိုင်ပါတယ်။ နှင့်အညီ, အကူအညီနှင့်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်, သင်တို့၏လိင်ဘဝမရောက်မီထက်ပင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်!
ဒေါက်တာ RY Langham လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှငျ့မိသားစုကုထုံးနှင့် Ph.D ဘွဲ့ကိုအတွက်သိပ္ပံမဟာရရှိထားသူ မိသားစုစိတ်ပညာ၌တည်၏။ သူမသည်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် ကြှနျုပျတို့ကိုဆေးခန်းများအကြား, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်ကြုံနေရယောက်ျားနှင့်စုံတွဲများအဘို့လိင်-ကုထုံးအွန်လိုင်းအစီအစဉ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသော။
မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းပြသနာနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ သင်ဟာညစ်ညမ်းစွဲသူတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးရှိမယ်ဆိုရင် Gina Kaye ... t.co/xhDfl9U6h2